राजदुतहरुकै अकर्मण्यताले विदेशमा नेपाल प्रति घृणा फैलाइँदैछ – BikashNews
राजदुतहरुकै अकर्मण्यताले विदेशमा नेपाल प्रति घृणा फैलाइँदैछ
२०७५ चैत २२ गते २२:५१ भीम प्रसाद उपाध्याय
काठमाडौं । नेपालका विदेशस्थित राजदूताबासहरू राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनका हो कि मुलुकको समृ्द्धि र बिकासका लागि हो ? दुताबासहरुको मुल्यांकन गरेर काम नहुने, गर्न नसक्ने वा औचित्य नभएकाहरूलाई खारेज गर्दै खर्च कटौती तर्फ लाग्ने समय भैसकेको छ । कतिपय मुलुकले अवैतनिक राजदूत नियुक्त गरी वा एकजना मात्र व्यक्तिलाई राजदूताबास संचालन गर्न जिम्मेवारी दिन्छन् । ती मुलुकमा एउटा कोठा भाडामा लिई राजदूत नियुक्त सबै काम ऊ स्वयंले नै गर्ने गरी खर्च कटौति गरिरहेका छन् ।
नेपालस्थित अधिकॉश युरोपका राजदूताबासहरू भिसा पनि यहॉ काठमांडौबाट हैन दिल्लीबाट दिने गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूमा किन राजदूताबास राखिरहने ? राजदूतबाहेक अरू कुनै पद नराख्ने र एउटामात्र कोठामा कार्यालय राख्ने नीति अपनाउनुपर्ने देखियो । राजदूत हुनेले सबै काम आफै गर्न सक्नुपर्यो , काम न सामको नेताहरूलाई फोकटमा विदेश घुमाउने काम गर्न मात्र हाकिम बन्न पठाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालका सरकारी कार्यालयहरूले जनतालाई दुःख दिए कमसे कम यहॉका मिडियाहरू चिच्याउछन्, र त्यसको यदाकदा केही हदसम्म सुनुवाई पनि हुने गरेको पाईन्छ । तर नेपालका बिदेशस्थित राजदूताबासहरूको दादागिरी, मनपरी, गैरजिम्मेवार व्यवहार, हाकिमगिरीका र अपहेलनाका कारण त्यहॉका नेपालीहरूले पाएको दुःख, कष्ठ, बेईज्जति वा हेपाईको दुःखबारे बोलिदिने कोही देखिन्नन्।
राजदूताबासका राजदूत र कर्मचारीहरूबाट हेपिएका, प्रताडितहरू मनमनै नेपाली भएर यो धर्तिमा जन्मनु परेकोमा आफूलाई धिक्कारिरहन्छन्, सके त्यही विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएर दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि बस्न समेत बाध्य हुदै तयार हुन्छन् । बिदेशी दूताबासमा बिदेशी स्केलमा तलब भत्ता सुबिधा लिने तर काम भने सिन्को नभाच्ने उल्टै नेपालीलाई नै हेप्नेहरूलाई कसरी नत्थी लगाउने होला ? यो गम्भीर बिषय बनिसकेको छ ।
बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू किन यति सीह्रो नेपाल, नेपाली नेताहरूप्रति विद्वेष , शत्रुवत आलोचनात्मक मात्र व्यवहार गर्छन् ? यसको पछाडीको मूल कारण ती राजदूवासहरूको नेपालीप्रतिको यस्तै दुर्व्यवहार नै हुन् । सरकारको चेत खुलोस्। दलहरूले लेभी उठाउने कामका लागि कार्यकर्ताहरुलाई पठाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत भॉड्न राखिएका हैनन् ती राजदूताबासहरू ।